Advil သောက်သုံးသော, ပုံစံများနှင့်အားသာချက်များ | တစ်ယောက်တည်း - မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း | ဇန္နဝါရီလ 2022
ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကျန်းမာရေး ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, သတင်း ကုန်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ဆီးဂိမ်း သတင်း၊ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး သတင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း >> Advil သောက်သုံးသော, ပုံစံများနှင့်အားသာချက်
Advil သောက်သုံးသော, ပုံစံများနှင့်အားသာချက်
Advil ပုံစံများ & အားသာချက်များ | လူကြီးများအတွက် advil | ကလေးများအတွက်ဘေး | Advil သောက်သုံးသောဇယား | နာကျင်ခြင်းနှင့်ဖျားနာခြင်းအတွက် Advil သောက်သုံးသော | အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်ဘေး | Advil ယူဘယ်လို | မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Advil (တက်ကြွစွာပါဝင်သည့်အရာ - ibuprofen) သည်ယာယီသက်သာစေရန်အသုံးပြုသောဆေးဝါးဖြင့်မွမ်းမံထားသောအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ဖျားခြင်း။ ကိုယ်ပူခြင်း ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ သွားကိုက်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ ကြွက်သားနာခြင်း၊ အအေးမိခြင်း၊ Advil သည်ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာရုံသာမကမည်သည့်ဆေးကုသမှုကိုမျှမကုသပါ။ Advil ကိုပါးစပ်ဖြင့်တက်ဘလက်၊ caplet၊ gel caplet (သို့) အရည်ဂျယ်ဆေးတောင့်အဖြစ်ယူသည်။ ဒါဟာအစားအစာနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲယူနိုင်ပါတယ်။
RELATED: Advil ဆိုတာဘာလဲ။ | Advil ကူပွန်
Advil ကိုဆေးလုံးတစ်ခုစီတွင် ၂၀၀ မီလီဂရမ်နှင့် Ibuprofen ပါဝင်သောတက်ဘလက်များ၊ caplets သို့မဟုတ် gel caplets အဖြစ်ရောင်းချသည်။
Advil Liqui-Gels၊ Advil Liqui-Gel Minis၊ Advil Easy-Open Arthritis Cap (တက်ဘလက်များသို့မဟုတ်ဂျယ်ဆေးတောင့်များ) နှင့် Advil Migraine (gel capsules) တို့ပါဝင်သည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီတွင်ဆေးပြားတစ်လုံးလျှင် ibuprofen 200 mg ပါရှိသည်။
Advil Dual Action သည် caplet တစ်ခုစီတွင် ၂၅၀ မီလီဂရမ် acetaminophen နှင့် Ibuprofen 125 mg ပေါင်းစပ်ထားသည်။
လူကြီးများအတွက် Advil သောက်သုံးသော
Advil သည်ရောဂါလက္ခဏာများဆက်ရှိနေစဉ်လေးနာရီမှခြောက်နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်သောက်ရသောတစ်ဘူး၊ caplet သို့မဟုတ် gel ဆေးတောင့် (၂၀၀ မီလီဂရမ်) ကိုပုံမှန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူထိုးဆေးထိုးထားသည်။ အကယ်၍ တက်ဘလက်တစ်လုံး၊ caplet သို့မဟုတ်ဆေးတောင့်သည်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်ဖျားနာခြင်းကိုသက်သာစေရန်လုံလောက်မှုမရှိပါကဆေးကိုခြောက်နာရီလျှင်နှစ်ကြိမ်ဆေးနှစ်ကြိမ်၊ caplets သို့မဟုတ်ဂျယ်ဆေးတောင့်သို့နှစ်ဆတိုးနိုင်သည် (အများဆုံး ၂၄ နာရီအတွင်းအများဆုံး ၆ ခုဆေးပြားဖြင့်) ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်ဆယ်ကျော်သက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက် standard Advil သောက်သုံးသောပမာဏ - လေးနာရီမှခြောက်နာရီတိုင်းတွင်ဆေးတစ်ပြားမှနှစ်ခွက်၊ caplets သို့မဟုတ် gel capsules (200-400 mg) ကိုရောဂါလက္ခဏာများကြာရှည်နေချိန်တွင်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအများဆုံးပမာဏကိုကြည့်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်ဆယ်ကျော်သက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်အမြင့်ဆုံး Advil သောက်သုံးသောပမာဏ - ၂၄ နာရီအတွင်းဆေးခြောက်လုံး (၁၂၀၀ မီလီဂရမ်) ထက်မပိုပါ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ် ဦး ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်မှမဟုတ်လျှင် ၁၀ ရက်ထက်ပိုပြီးမသုံးပါနှင့်။
သင့်တွင်အသည်းသို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိပါကသင့်လျော်သော ibuprofen သောက်သုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ကလေးများအတွက် Advil သောက်သုံးသော
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော Advil ထုတ်ကုန်များကိုအရွယ်ရောက်ပြီးကလေးများနှင့် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်များတွင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
ကလေးများအတွက်၊ စောင့်ရှောက်သူများသည်ခြောက်နာရီမှရှစ်နာရီလျှင်အထူးပြုလုပ်ထားသောကလေးငယ်များအတွက်အထူးရေးဆွဲထားသော Advil ထုတ်ကုန်သုံးမျိုးအနက်မှတစ်ခုအားစီမံခန့်ခွဲရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
မွေးကင်းစ '' Advil drop ၆-၂၃ လအရွယ်ကလေးများအတွက် (၁.၂၅ မီလီမီတာအရည်အတွက် ၁ ဝမီလီဂရမ် (မီလီဂရမ်) အိုင်ဗူဖရိုဖင်ဖြင့်ပါးစပ်ဖြင့်ဆိုင်းငံ့ခြင်း) ။
ကလေးများ Advil ဆိုင်းငံ့မှု 2-11 အရွယ်ကလေးများအတွက် (5 mL အရည်နှုန်းဖြင့် 100 mg ibuprofen ဖြင့်ပါးစပ်ဖြင့်ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း)၊သကြားနှင့်ဆိုးဆေးအပါအ ၀ င်အရသာမျိုးစုံရရှိနိုင်သည်) ။
အငယ်တန်းအစွမ်းသတ္တိ Advil Chewables စပျစ်သီးအနံ့စားနိုင်သောတက်ဘလက်တစ်ခုစီတွင် ၁၀၀ မီလီဂရမ် Ibuprofen နှင့်အတူ ၂-၁၁ အရွယ်ကလေးများအတွက်။
အသက်အရွယ်အားဖြင့် Advil သောက်သုံးသော
အသက် (yrs) အကြံပြုသောက်သုံးသော * အများဆုံးသောက်သုံးသော
၁၂-၁၇ လိုအပ်ပါက 4-6 နာရီတိုင်းတွင် 1-2 таблет, caplets သို့မဟုတ်ဆေးတောင့် (200-400 mg) ၆ နာရီလျှင်တစ်ကြိမ်လျှင် ၂ ပြားထက်ပိုသောဆေးများ၊ caplets (သို့) ဆေးတောင့် (၄၀၀ မီလီဂရမ်) ထက်မပိုစေဘဲ ၂၄ နာရီကြာတိုင်းတစ်လုံးလျှင်ဆေးပြား ၆ လုံး (၁၂၀၀ မီလီဂရမ်) ထက်မပိုစေရ။
<12 ဆရာဝန်ကိုမေးပါ ဆရာဝန်ကိုမေးပါ
ညွှန်ပြ အသက် စံသောက်သုံးသော အများဆုံးသောက်သုံးသော
အသေးအမွှားနာခြင်း၊ ≥၁၂ နှစ် 4-6 နာရီတိုင်း 200-400 mg (၁-၂ ဆေးပြား၊ caplets သို့မဟုတ်ဆေးတောင့်) ၂၄ နာရီအတွင်း ၁၂၀၀ မီလီဂရမ် (ဆေးပြား ၆ လုံး၊ caplets သို့မဟုတ်ဆေးတောင့်များ)
နာကျင်ခြင်းနှင့်ဖျားနာခြင်းများအတွက် Advil သောက်သုံးသော
ကြွက်သားနာခြင်း၊ ကျောရိုးနာကျင်ခြင်း၊ သွားကိုက်ခဲခြင်း၊ premenstrual / menstrual ကြွက်တက်ခြင်းသို့မဟုတ်အအေးမိခြင်းတို့ကြောင့်အရွယ်ရောက်ပြီးဆယ်ကျော်သက်များအတွက် ၁၂ နှစ်နှင့်အထက်လူကြီးများအတွက် Advil ကိုအသေးအဖွဲနာကျင်မှုနှင့်နာကျင်မှုကိုယာယီသက်သာစေရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Advil လည်းယာယီဘို့ယူနိုင်ပါသည် အဖျားသို့မဟုတ်ချမ်းတုန်၏သက်သာရာ ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ (၁၂ နှစ်နှင့်အထက်) - လေးလေးမှခြောက်နာရီတိုင်း 200-400 mg ။ 24 နာရီကာလအတွင်းမက်စ်သောက်သုံးသော 1200 မီလီဂရမ်။
ကလေးအထူးကုလူနာများ (၁၁ နှစ်နှင့်အထက်) : ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကိုမေးပါ။
ကျောက်ကပ် - ချို့တဲ့လူနာ :
၃၀-၆၀ ml / min ၏ Creatinine clearance - သတိဖြင့်အသုံးပြုပါ (သင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူနှင့်ဆွေးနွေးပါ)
30 ml / min အောက်လျော့သော Creatinine clearance: မသုံးပါနှင့်
Dialysis လူနာများ - မသုံးပါနှင့်
Hepatic- ချို့တဲ့လူနာ : သတိဖြင့်အသုံးပြုပါ (သင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူနှင့်ဆွေးနွေးပါ)
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသောအမျိုးသမီးများသည်ဆရာ ၀ န်၏ညွှန်ကြားချက်မရလျှင် Advil မသောက်သင့်ပါ။
ကျောက်ကပ်နှင့်အဆုတ်များသို့ပြင်းထန်သောရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အပတ် ၂၀ ကြာပြီးနောက် Advil ကိုမသုံးသင့်ပါ။ Advil လည်းပြီးနောက်ယူဘယ်တော့မှသငျ့သညျ ကိုယ်ဝန် ၂၀ ပတ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမမွေးသေးတဲ့ကလေးကိုအကြီးအကျယ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပြီးသေစေနိုင်တယ်။
အလွန်သေးငယ်သောပမာဏအနည်းငယ်သာသာမိခင်နို့တွင်ပါ ၀ င်သောကြောင့် Advil သည်နာကျင်မှုသက်သာစေသည့်ဆေးဝါးတစ်ခုဖြစ်သည် သူနာပြုမိခင်များ ။ ထုတ်လုပ်သူ သို့သော်၎င်းကိုမသောက်မီဆရာဝန်နှင့်စကားပြောရန်အကြံပေးသည်။
နှလုံးသွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်း၊ gastritis၊ အနာ၊ မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန်၊ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ သွေးလွှတ်ကြောကျဉ်းခြင်း၊ ရောင်ရမ်းအူသိမ်အူမရောဂါ (IBD) ရှိသူများ၊ Advil မသောက်မီဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် Advil သောက်သုံးသော
Advil, Motrin (သို့) အခြား OTC ibuprofen ကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များကိုဘယ်တော့မှမပေးသင့်ပါ။ Ibuprofen သည် FDA ကအတည်ပြုသည်မဟုတ်ပါ တိရိစ္ဆာန်များတွင်အသုံးပြုရန်နှင့်ခွေးများ၊ ကြောင်များ၊ ငှက်များနှင့်အခြားအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အဆိပ်ဖြစ်စေသည်။ NSAID များသည်ပြင်းထန်သောအစာအိမ်အနာ၊ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းမှသွေးထွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အစာအိမ်ဖောက်ခြင်းနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတွင်အသည်းသို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ကြောင်များသည် ibuprofen ကို metabolize လုပ်ရန်မစွမ်းနိုင်။ သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်အဖျား (သို့) နာကျင်မှုသက်သာစေရန်လိုအပ်ပါကတိရိစ္ဆာန်ဆရာနှင့်ပြောဆိုပါ။ သူတို့အနေဖြင့် FDA အတည်ပြုထားသော NSAID နှင့် ibuprofen (တိရိစ္ဆာန်များအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားသည့်) နှင့်တိရစ္ဆာန်အတွက်သင့်လျော်သောဆေးများဖြင့်ညွန်ကြားထားလိမ့်မည်။
Advil ကိုရေ၊ ပါးစပ်ဖြင့်တက်ဘလက်၊ caplet၊ gel caplet (သို့) အရည်ဂျယ်ဆေးတောင့်အဖြစ်သောက်သုံးသည်။ ထုတ်လုပ်သူများကအကြံပြုထားသောဆေးသည်လေးနာရီမှခြောက်နာရီတိုင်းတွင်ဆေးတစ်ဘူး (200 mg) ဖြစ်သည်။
Advil တက်ဘလက်၊ caplet သို့မဟုတ်ဂျယ်ဆေးတောင့်ကိုသောက်သောအခါ -
ရောဂါလက္ခဏာများကြာရှည်နေ သ၍ တစ်နာရီလေးနာရီမှခြောက်နာရီတိုင်းဆေးပြားတစ်လုံး၊
အကယ်၍ သင်တ ဦး တည်းအနေဖြင့်၊ ဆေးတောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဂျယ်ဆေးတောင့်သည်ရောဂါလက္ခဏာသက်သာစေရန်လုံလောက်မှုမရှိပါက၊ ဆေးခြောက်နှစ်လျှင်နှစ်ခါဆေးနှစ်ကြိမ်၊
ဘေးဥပဒ်ကိုအစားအစာနှင့်ဗိုက်ဆာနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင့်အားစိတ်ဆိုးသည့်အစာအိမ်ကိုပေးလျှင်အစားအစာသို့မဟုတ်နို့နှင့် Advil ကိုသင်သောက်သုံးနိုင်သည်။
လွဲချော်ထိုး။ အကယ်၍ သင်သည်ဤဆေးကိုပုံမှန်သောက်ပြီးဆေးကိုလက်လွတ်ပါကချက်ချင်းသောက်ပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်ဆေးထိုးရန်အချိန်နီးကပ်ပါကဆေးကိုသုံးရန်နှင့်လွဲချော်နေသောဆေးကိုကျော်ရန်ထိုအချိန်အထိစောင့်ပါ။ လွဲချော်သောဆေးထိုးရန်အတွက်အပိုဆေးကိုမသုံးပါနှင့်။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ ဆေးသည်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကိုကျော်လွန်သွားပါက၎င်းကိုဘေးကင်းစွာဖယ်ရှား။ ပုလင်းအသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ပါ။
မရည်ရွယ်ဘဲအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်၊ ဆေးမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုသိမ်းထားပါ၊ သင့်တော်သောအချိန်မတိုင်မီနောက်ထပ်ဆေးကိုမသောက်ပါနှင့်။
Advil သောက်သုံးသော FAQs
Advil တက်ဘလက်များစတင်အလုပ်လုပ်သင့်ပါတယ် 15-30 မိနစ်ခန့် နှင့်တစ်နာရီမှနှစ်နာရီအကြာတွင်အဖျားလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်နာကျင်မှုသက်သာစေရန်အမြင့်ဆုံးထိရောက်နိုင်သည်။ အရည်ဂျယ်လ်တောင့်သည်အနည်းငယ်မြန်မြန်စတင်အလုပ်လုပ်ပြီးတစ်နာရီခန့်အကြာတွင်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်လိမ့်မည်။
အကြံပြုထားသောသောက်သုံးသောအချိန်တွင် Advil သည်အဖျား (သို့) နာကျင်မှုအနည်းဆုံးလေးနာရီမှခြောက်နာရီထိထိရောက်စွာထိန်းချုပ်သင့်သည်၊ သို့သော်၎င်းဆေးသည်ခန္ဓာကိုယ်မှလုံးဝထွက်ခွာရန်တစ်ရက်ခန့်ကြာမည်။ ခြောက်နာရီခန့်တွင် Advil ဆေး၏အနည်းငယ်မျှသာသွေးကြောထဲတွင်ရှိနေသည်။
ခန္ဓာကိုယ်သည် ibuprofen ကိုအလျင်အမြန် metabolize လုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာခန္ဓာကိုယ်သည်၎င်းကိုအခြားမလှုပ်မရှားဓာတုဗေဒတစ်ခု (metabolite ဟုခေါ်သည်) အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများသည် ibuprofen ၏ခန္ဓာကိုယ်၏ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအားဝက်ဝက်သက်တမ်းဖြင့်တိုင်းတာသည်၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ibuprofen ပမာဏ၏ထက်ဝက်ကို metabolize လုပ်ရန်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အချိန်ယူရသည်။ ibuprofen ၏ထက်ဝက်ဘဝ အရွယ်ရောက်သူများတွင်နှစ်နာရီသာရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာနှစ်နာရီကြာလျှင်ဆေးတစ်ဝက်သောက်တော့သည်။
Ibuprofen ကိုသွေးစီးဆင်းမှုမှဖယ်ရှားရန်ကလေးများသည်ခြောက်နာရီမှရှစ်နာရီကြာနိုင်သည်။ သို့သော်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသည် ibuprofen ကိုကိုယ်ခန္ဓာမှအခြားလူကြီးများနှင့်တူညီသောနှုန်းဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်ပုံရသည်။
ငါ Advil တစ်ထိုးလွဲချော်လျှင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ
Advil ကိုနောက်ခံအခြေအနေတစ်ခုခုအတွက်ကုသမှုတစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲရောဂါသက်သာစေရန်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ Advil ကိုဖြစ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးသောပမာဏနှင့်သာလက္ခဏာများဆက်ရှိနေ သ၍ သာအသုံးပြုသင့်သည်။ အဆိုးဆုံးအနေဖြင့်ဆေးတစ်ကြိမ်သောက်ခြင်းသည်ရောဂါလက္ခဏာပြန်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆေးသောက်ပြီးမှရောဂါလက္ခဏာများပြန်မလာပါကအခြားဆေးမလိုအပ်ပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ဆေးထိုးလက်လွတ်နှင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေပြန်လာလျှင်, စိတ်မပူပါနဲ့။ ရှေ့သို့သွားပြီးအခြားတက်ဘလက်တစ်လုံးသို့မဟုတ်ဆေးတောင့်ကိုသောက်ပါ ၎င်းသည်ဆေးထိုးချိန်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သောကြောင့်နောက်ထပ်လေးနာရီမှခြောက်နာရီအထိနောက်ထပ်ဆေးမသောက်ပါနှင့်။ လွဲချော်သောဆေးပမာဏသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုအတွက်အစားထိုးရန်နှစ်ဆသော Advil ဆေးမသောက်ပါနှင့်။
Advil ကိုအခါအားလျှော်စွာနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း (သို့) နာကျင်ခြင်း (သို့) အဖျားသက်သာစေရန်အတွက်အသုံးပြုသည်ဆိုပါကရောဂါလက္ခဏာများမှေးမှိန်သွားသည်နှင့်ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းသင့်သည်။ ကြိုတင်ရံဖန်ရံခါရံဖန်ရံခါအသုံးပြုသော Advil ကိုရပ်စဲသောအခါသိသာသောရုပ်သိမ်းမှုလက္ခဏာများကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။
Advil ကိုနာတာရှည်ခေါင်းကိုက်ခြင်း (တစ်လလျှင် ၁၅ ရက်သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပို) အသုံးပြုသည်ဆိုပါက rebound ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွန်အကျွံခေါင်းကိုက်ခြင်း ။ အလွန်အကျွံသုံးလျှင်ပင် Advil ကိုရုတ်တရက်ရပ်ဆိုင်းထားနိုင်သည်။ Advil သည်တစ်လလျှင် ၁၅ ရက်သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောဆေးများကိုသောက်သုံးနေလျှင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်ရယူပါ။ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကုသမှုအစီအစဉ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသူတို့ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါကုသရန်ကူညီနိုင်သည်။
၁၀ ရက်ထက်ပိုသောနာကျင်မှုသည်ပိုမိုဆိုးရွားလာပါကဆက်လက်ဆိုးရွားလာပါက (သို့) ၁၀၃ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထက်သို့တက်ပါကဖျားနာခြင်း (၃) ရက်ထက်ပိုကြာခြင်း၊။ အလွန်ရှားပါးသောဖြစ်ရပ်များတွင် Advil သည်ပြင်းထန်။ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအရေပြားတုံ့ပြန်မှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ Advil ကိုမသောက်ပါနှင့်အနီရောင်၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အဖုအပိန့်များ၊ ခရမ်းရောင်အရေပြားသို့မဟုတ်အရည်ကြည်ဖုများကဲ့သို့သောပြင်းထန်သည့်ဆေးမတည့်သည့်တုံ့ပြန်မှုလက္ခဏာများတွင်အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူပါ။
Nonsteroidal Anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါး (NSAIDs) ကဲ့သို့သော Motrin မွေးကင်းစကလေး ခြောက်လအထက်ကလေးများအတွက်မွေးကင်းစ '' Advil ၏အရပျ၌အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင့်လျော်သောထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်သောက်သုံးရန်လမ်းညွှန်မှုအတွက်သင့်ကလေး၏ကလေးအထူးကုနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ဒါ့အပြင်ယေဘုယျဖော်မြူလာရရှိနိုင်ပါသည်။
Advil ၏အမြင့်ဆုံးနေ့စဉ်ဆေးထိုး ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်သာရှိသော်လည်းဆေးညွှန်း၏အများဆုံးဆေးပမာဏမှာမူဘူတန်သည်အဆုတ်ရောဂါကဲ့သို့သောအခြေအနေများအတွက် ၃၂၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ အဆစ် , osteoarthritis, spondylitis ankylosing, ဂေါက် , lupus နှင့်အခြားရောင်ရမ်းအခြေအနေများ။ ဆရာဝန်မညွှန်ကြားထားပါက ၂၄ နာရီအတွင်း Advil တက်ဘလက်၊ caplets သို့မဟုတ်ဂျယ်ဆေးတောင့် (စုစုပေါင်း ၁၂၀၀ မီလီဂရမ်) ထက် ပို၍ မယူပါနှင့်။
အဘယ်အရာသည် Advil နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်?
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရအာဟာရရှိသောအစားအစာကိုစားသုံးခြင်းကရင်ပူခြင်း၊ အစာအိမ်နာခြင်း (သို့) အခြားအစာခြေစနစ်ပြproblemsနာများကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ Ibuprofen ကိုဘယ်တော့မှမသောက်သင့်ပါ၊ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေသည်။
အလွန်နည်းသောဆေးဝါးများသို့မဟုတ်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်မှုများသည်နာကျင်မှုသက်သာစေရန် Advil ၏ထိရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထူးခြားသောခြွင်းချက်တစ်ခုမှာသည်ကိုလက်စထရောကိုကုသရန်အသုံးပြုသောဆေးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သောသည်းခြေအက်စစ်ဆက်ထိန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားမူးယစ်ဆေးဝါးများ Advil အဖြစ်အချို့သောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစုပ်ယူရန်၏ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပါလိမ့်မယ်။
သို့သော်ငြားလည်း, ကဖိန်းဓာတ်တိုး နှစ်ခုအတူတကွခေါ်ဆောင်သွားသောအခါနာကျင်မှုသက်သာစေရန် ibuprofen ၏စွမ်းရည်။ အချို့သောနာကျင်မှုသက်သာစေသည့်ဆေးများသည်ကဖိန်းဓာတ်ကို Aspirin နှင့် / သို့မဟုတ် acetaminophen နှင့်ပေါင်းစပ်သည် ကဖိန်းဓာတ်နှင့်အီဗူဖရိုကိုပေါင်းစပ်သည် ။
အားလုံးသောဆေးများကဲ့သို့ပင် Advil သည်အခြားဆေးများနှင့်လည်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ စတင်ရန် ibuprofen နှင့်အခြားဆေးများနှင့်ပေါင်းစပ်။ ibuprofen သို့မဟုတ် Aspirin သို့မဟုတ် naproxen ကဲ့သို့သော NSAIDs များကိုမသောက်ပါနှင့်။ ဒီပေါင်းစပ်မှုကပြင်းထန်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ibuprofen နှင့်အခြား NSAIDs များသည်ခန္ဓာကိုယ်၏သွေးခဲဖွဲ့စည်းနိုင်စွမ်းကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့် Ibuprofen အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း (သို့) အခြား NSAIDs များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သွေးထွက်ခြင်း၊ နာကျင်မှုဆေးဝါးများပေါင်းစပ်မီအမြဲတမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်ကိုရှာဖွေပါ။
တူညီသောအကြောင်းပြချက်ရှိပါက Advil သည် antikoagulant ဆေးများသို့မဟုတ်အချို့သောစိတ်ကျဆေးများ (SSRI, SNRI) နှင့်မသောက်သင့်ပါ။ ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောသွေးထွက်သည့်ဖြစ်စဉ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ များစွာသောအစားအသောက်သို့မဟုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များတွင်ပါ ၀ င်သည် anticoagulant ဂုဏ်သတ္တိများ ။ Omega-3 fatty acids၊ ငါးဆီ၊ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့်အခြားဖြည့်စွက်ဆေးများသည်ခဲမှုပြproblemsနာများနှင့်သွေးထွက်ခြင်းဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင် ibuprofen ကိုဖြည့်စွက်ဆေးများဖြင့်သောက်နေလျှင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်နှင့်ပြောဆိုပါ။
Advil ကို serotonin reuptake inhibitor (SSRI) ဖြင့်လည်းမသုံးသင့်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်ကျဝေဒနာကိုကုသရန်အသုံးပြုသောဤဆေးများသည် antikoagulant သက်ရောက်မှုများရှိသည်။ Advil သို့မဟုတ်အလားတူဆေးများနှင့်ပေါင်းစပ်ပါကပေါင်းစပ်ခြင်းသည်အန္တရာယ်ကိုသိသိသာသာတိုးစေသည် အူလမ်းကြောင်းသွေးထွက် ။
Ibuprofen သည်အချို့သောအရေးကြီးသောဆေးညွှန်းဆေးများ၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချပေးသည်။ ဥပမာ - ACE inhibitors, beta-blockers, angiotensin receptor blockers နှင့် diuretics ဆေးများအပါအဝင်သွေးပေါင်ချိန်များသောဆေးဝါးများ။ Advil ကိုဒီဆေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီး Advil ဘေးထွက် - ဆိုးကျိုးတွေကိုများစေတယ်။
ကွမ်းခြံကုန်း , Epocrates
Advil လုံခြုံမှု , GlaxoSmithKline
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် Pain Relievers နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုရယူပါ ၊ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန (FDA)
Ibuprofen ဒြပ်ပေါင်းများအကျဉ်းချုပ် , ဆေးပညာအမျိုးသားစာကြည့်တိုက်
rebound ခေါင်းကိုက်၏သံသံသရာကိုရပ်တန့် , ဟားဗတ်ကျန်းမာရေးထုတ်ဝေရေး
ရွေးချယ်ထားသောအစားအသောက်ဖြည့်စွက်ခြင်း၏ anticoagulant လှုပ်ရှားမှု , အာဟာရကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
မိခင်နို့ရည်ထဲသို့ Ibuprofen ထုတ်ယူမှု , သားဖွားမီးယပ်၏အမေရိကန်ဂျာနယ်
Ibuprofen မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်နို့တိုက်ကျွေးရေး Database
Ibuprofen အဆိပ်အတောက် , StatPearls
ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုကုသရန် ibuprofen နှင့် caffeine ပေါင်းစပ်မှုသည်ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည် ? မိသားစုအလေ့အကျင့်၏ဂျာနယ်
Over-the-Counter (OTC) Ibuprofen - နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်စားသုံးသူသုံးစွဲခြင်း ၊ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာန (FDA)
Plan B သည်မည်မျှထိရောက်သနည်း၊ ၎င်းသည်မည်မျှထိထိရောက်နိုင်သနည်း။
Dulcolax vs. Miralax: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
ဟေမိုဂလိုဘင်နှင့် hematocrit မြင့်တက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်
hydrocodone acetaminophen သည် vicodin နှင့်တူသည်
planbအလုပ်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
zyrtecdတွင်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသည်ဘာလဲ
တုပ်ကွေးအမျိုးအစား A ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ